Yonke imishwalense ongayithola | Ezezimali Zomnotho
Umshuwalense umkhakha onhlobonhlobo kangangokuba unezixazululo zomsebenzi ngamunye ovelayo empilweni. Kusuka kokuningi zendabuko, njengalezo ze- ikhaya noma imoto, kokunye okukhethekile futhi okusha futhi okungakuvikela kunoma yimuphi umsebenzi owenziwa ngokomzimba, njengemijaho ethandwayo. Vele, akunamkhawulo ekubhaleni ngaphansi kwanoma iyiphi yale mikhiqizo yomshuwalense. Kumele ucace nje ngezidingo zakho zangempela maqondana nalezi zinhlobo zokuvikela.
Umshuwalense ungafakwa ezigabeni ezahlukahlukene, futhi lapho ufakwe khona uhlobo lwengozi, i-premium, indawo noma umsebenzi wobungcweti owenzayo. Enye yezindlela ongakhetha kuzo kusukela manje yilezo ezibhekisela kumshuwalense wosizo lwezomthetho, usizo lokuhamba futhi, ekugcineni, ukufa. Kunoma ikuphi, ngezinye zezinto ezivame kakhulu ongazithola kulo mzuzu oqondile. Ngokucacile, uhla lwamathuba luvula kuwe olungenamkhawulo, njengoba uzobona ngezansi.
Awukwazi ukukhohlwa ukuthi umkhakha womshuwalense ungenye yezindawo ezinkulu kakhulu okwamanje. Ngoba empeleni, yonke into ingaqinisekiswa ngisho nokungaqondakali kakhulu, njengezandla zakho ezingasho ukuthi ngemuva kwakho konke ithuluzi lomsebenzi kweminye imisebenzi. Njengesibonelo, kubaculi, izintatheli, ababhali noma abaklami. Lapho umsebenzi wakho wokuqala uzosuselwa ekulinganiseni ubungozi obungathinta ubuqotho bomzimba noma impilo yabanomshwalense. Hhayi ngeze, akuyona nje noma yimuphi umkhiqizo, ukude nawo. Kuyinto ezokuqinisekisa kusukela manje.
1 Umshuwalense wokuhamba
3 Izinqubomgomo ezihlangene
4 Ukuvikelwa komuntu siqu
5 Umshuwalense wangasese
6 Izilwane ezifuywayo nezinto ozithandayo
Ngaphakathi kwalolu hlu lwemishwalense ongayibhalisela kusukela manje kuqhubeke, okunye okubaluleke kakhulu yilokho okubhekiswe kukho ukuhamba emoyeni. Inzuzo yayo enkulu yokuthi, ekugcineni, ukwenziwa kwayo ngokusemthethweni kuzokunxephezela ngaphambi kwakho konke okungenzeka kuwe ngesikhathi uhlala kule ndlela yokuhamba. Ngakolunye uhlangothi, futhi iyithuluzi elinamandla ukuvikela noma ukuvikela noma yiluphi uhlobo lokuthengiswayo noma izinto. Kulokhu, ilungele kakhulu osomabhizinisi abazinikele ekumaketheni imikhiqizo noma ama-athikili abo.
Ngokulinganayo, kwenziwa umshwalense wasolwandle futhi inhloso yawo enkulu ukuvikela abasebenzisi nezinto zabo kusuka noma isiphi isigameko lokho kungadalwa ngaphakathi komkhumbi. Yize enye yezinhloso zayo ezilandelwa kakhulu ihlobene nokuzulazula kanye nokonakala kwempahla. Banesiqiniseko sokuthi banezinhlelo ezihlukile ngokuya ngenhloso oyifunayo ngasikhathi ngasinye. Iningi lemisebenzi engathuthukiswa ngaphakathi kwalesi sigaba sezohwebo.
Ukuqinisekisa ikusasa kungenye yezinjongo ezinhle zomshwalense. Futhi ngalo mqondo, ukukhokhwa kweprimiyamu ngaphandle kokungabaza okungakuvikela ezimeni ezingalindelekile empilweni yakho. Hhayi ize, kanye umshwalense uyafa, ukucatshangelwa yinkampani yomshuwalense kwenziwa ngomklomelo ongaba wuhlobo lwemali engenayo noma imali eyinhloko. Lapho abahlomuli uqobo lwabo bazoyithola khona le mali futhi njalo. Lesi sigaba samaphrimiyamu singaba sesikhashana futhi lapho kufanele usethe khona isikhathi lapho inqubomgomo ihlanganisa khona. Kungaba neminyaka embalwa ubudala noma 20 noma 30 uma lokhu kuyisifiso sakho.
Kulesi simo, ungaya futhi lokho okubizwa nge- umzala ongashadile. Okuqukethe umninipholisi kuphela owenza izindleko kuyo yonke inkontileka. Ngakho-ke, le kungenye indlela ephumelela kakhulu yokuqinisekisa ikusasa noma lelo lezihlobo zakho eziseduze lapho bebhekene nalokho okungenzeka kusukela ngesikhathi sokuqashwa kwabo. Akumangalisi ukuthi ingenye yezinhlobo zomshuwalense ezivame kakhulu ekwakhiweni kwayo ngokusemthethweni. Ngoba ngaphezu kwakho konke uzobe ubheka imiphumela yalokho okungenzeka kuwe eminyakeni ezayo. Akuyona indlela embi yokubona ikusasa kusengaphambili.
Ngaphandle kwenkolelo evamile, umshuwalense akudingeki ukuthi ube wedwa. Hhayi kancane. Kukhona futhi okuthiwa njengamaqoqo inhloso yakhe enkulu ukuvikela iqembu labantu, noma ngabe inqubomgomo yenziwe ngumninipholisi oyedwa. Bangaba yiqembu eliqeqeshiwe (ababhali, abasebenzi, abasebenza ngamapayipi, njll.), Kodwa futhi nemiphakathi engomakhelwane noma abagijimi ababamba iqhaza emicimbini yezemidlalo. Kunoma ikuphi, lolu hlobo olukhethekile lomshuwalense lubonakala ngesidingo sebhondi phakathi kwawo wonke amalungu ayo.
Lokhu yilokho okubizwa ngokuthi ukukhetha umshuwalense kuya ngenombolo yomshuwalense futhi kuwumkhuba obelokhu ukhula eminyakeni yamuva ngenxa yesidingo esinamandla kubo. Ngakolunye uhlangothi, kuyisu elihle kakhulu lokonga imali ngoba iphrimiyamu ishibhile isatshalaliswa kubo bonke labo abathintekile. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo ngeke ube nenye indlela yokubhalisela, njengoba isibonelo kwenzeka ngemiphakathi yangakini. Kepha njengalawa namanye amaqembu amaningi wanoma isiphi isigaba nesimo.
Enye yemishwalense eyisisekelo ongayithola kulo mkhakha yilowo onomthombo wakhe oyinkomba ngomshuwalense ngohlobo lwengozi. Ngalo mqondo, lesi sigaba semikhiqizo yezezimali sihlanganisa, ngaphezu kwakho konke, ubungozi bobuqotho babantu uqobo. Ngaphakathi kwaleli qembu elibalulekile kunalezo ezibhekise kumshuwalense wokuphila futhi oxhunywe kuzici ezifanele njenge izingozi, ukugula noma ngisho nokufa nokungcwatshwa okufanele komshuwalense. Akufanele ilahleke kuphothifoliyo yakho yomshuwalense yamanje, ingenye yezinto ezivame kakhulu futhi zithengiswa yizo zonke izinkampani zomshuwalense.
Ngakolunye uhlangothi, awukwazi ukukhohlwa ukuthi ngaphakathi kwalesi sigaba esibalulekile kukhona nomshuwalense wezinto zokwakha. Yibo vikela ukulimala kwento. Lesi sigaba sibandakanya ukuvaleka okwaziwayo njengaleyo ehambelana nemililo, ukubanjwa inkunzi, izehlakalo kwezokuthutha noma ezimotweni, noma lezo ezitholakala emisebenzini yobungcweti. Kungokunye kokuhleliwe kubasebenzisi. Ukubaluleka kwayo ukuthi kunezindlela eziningi zokuthola izinkontileka ngendlela yokuthi akunakwenzeka ukuzihlanganisa, ingasaphathwa eyokuthi uzifake njengoba ufisa.
Ungahle ungazi, kepha lezi zinhlobo ezikhethekile zezinqubomgomo zibonakala ngoba ekugcineni ngubani oqinisekisa inkampani, ubambiswano noma ukuhlanganyela. ESpain bayisigaba semikhiqizo eyiyo electives noma amavolontiya ukubhalisa. Lapho ukhetho lokunakekelwa kwezempilo kwangasese luhlala lunentshisekelo enkulu engxenyeni enkulu yomphakathi, olwazisa ithuba lokukhetha udokotela noma isibhedlela, kanye nejubane lokuya ekubonisaneni. Futhi lapho okunye kokufakwa okufunwa kakhulu kunakho konke okuphathelene nokunikezwa kwensizakalo entsha njengombono wesibili wezokwelapha.
Ngakolunye uhlangothi, lolu hlobo lomshuwalense luphelelisa impilo yomphakathi futhi lungavala izikhala ezingavaliwe kulolu hlelo lwezempilo. Okubandakanya kakhulu izinsizakalo zamazinyo lokho azimboziwe ezempilo yomphakathi. Abasebenzisi abaningi bayadinga ukuthola izinkontileka zalolu hlobo lwezinsizakalo ezidingeka kakhulu futhi ngasikhathi sinye ezikhethekile. Lapho, ngaphezu kwakho konke, ukuvikelwa kwempilo yakho nokwakho kunqobayo. Hhayi ize, izihlobo eziseduze kakhulu zingazuza, ezinjengabalingani bomshado nezingane.
Izilwane ezifuywayo nezinto ozithandayo
Okokugcina, le ndlela yokuziphatha ayikwazi ukukhohlwa kuzinqubomgomo ezibheka noma ikuphi ukuzilibazisa onakho ngesikhathi usisayina. Elinye lamacala ajwayelekile ukuzingela, ukudoba, isikebhe kanye imisebenzi yezemidlalo ikakhulukazi njengokutshuza nge-scuba. Konke kuyanela uma kukhulunywa ngokuqinisekisa emisebenzini oxhumana naye kakhulu ngonyaka. Lapho kungavela izehlakalo eziningi ezingakunika ukwethuka okuyinqaba. Ukulungisa le nkinga, sekuvele imishwalense eminingi kuze kube yiminyaka embalwa edlule eyayingaphansi kokungajwayelekile emkhakheni wenkampani yomshuwalense.
Lapho kukhona indawo yezingozi ezingakuthinta noma izinto ezihlobene nefa lakho ezingazwela kakhulu kunoma yisiphi isehlakalo esenzeka ngenkathi uqhuba igalofu, imidlalo yezempi, imidlalo enobungozi kakhulu noma omunye umsebenzi obucayi kulokhu umshuwalense omusha. Ngamafuphi, futhi njengoba kungenzeka ukuthi ubonile kule ndatshana, konke kungatholwa ngomshwalense. Ngisho nezici ezihlolwe kancane eminyakeni yamuva. Akumangalisi ukuthi ngumkhakha okhiqiza kakhulu futhi ohlanganisa izici ezahlukahlukene zempilo. Lapho into esemqoka ukuvikela le mikhiqizo ekunika yona.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Yonke imishwalense ongayiqasha